Amathiphu Kusuka ku-Semalt On Indlela Yokungafaki Izizinda Eziningi Nama-Spammers Wokudluliselwa Kusuka Ezibalo Zakho Ze-Google Analytics
Ezweni ukumaketha kwedijithali , ithrafikhi yangaphakathi, i-malware, kanye ne-spammers yokudlulisela kuyoba yingozi yangempela ezinhlanganweni ezincane. Abathengisi baqhuba amabhizinisi e-intanethi ngenhloso eyodwa yokuthola izinzuzo ezinkulu ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, amaphupho abo agxilwe yigciwane lesifo se-Trojan, i-malware, ne-fake eqhutshwa kumasayithi abo yi-spammers. Ukuveza izibalo ezigcwele traffic yangaphakathi neyengwenya kungaba yinkinga enjalo.
U-Nik Chaykovskiy, i- Semalt uMenenja Omkhulu Wempumelelo Yekhasimende, uthi izindlela nezindlela ezahlukene ziye zafakwa ekusizeni abathengisi nabanikazi bewebhusayithi ukulwa nokuhlunga u-spam yokudlulisela i-Google Analytics. Ukungafani nezizinda eziningi ezivela kuzibalo zakho kanye nombiko ube omunye wemisebenzi elula engenziwa emapulatifomu e-intanethi. Kodwa-ke, ukuqapha nokuqaliswa okufanele kuyadingeka ukwenza amasu asebenze kuwebhusayithi yakho.
Ukusebenzisa izihlungi zenkambiso ukukhipha izizinda eziningi kusuka kumbiko wakho
Iningi lamagama avamile asekelwa izihlungi zenkambiso. Uma kuziwa ezizindeni eziningi ezihambisana nezihlungi ezilodwa, ukushintsha indlela yakho yokusebenza kusuka ezihlungi ezichazwe ngaphambilini kuzihlungi zangokwezifiso kuyindlela engcono kakhulu. Ngaphambilini, abanikazi bewebhusayithi benza amazwi okuthi kunzima kanjani ukuhlunga izizinda eziningi ezaqhubeka zivela embikweni wakho njalo ngomzuzu owodwa..
Indlela yokuhlunga abagaxekile kuzibalo zakho ze-Google Analytics?
Engeza igama lemifanekiso bese ulibiza ngendlela oyithandayo. Isibonelo, "amasayithi ogaxekile."
Engeza uhlobo lokuhlunga. Esimweni sethu, sebenzisa isihlungi esithi "Custom"
Yakha inkinobho ethi "Khipha"
Engeza insimu yokuhlunga. "Ukudluliselwa" kuyamukeleka kakhulu kulokhu
Phumelela iphethini yakho yokuhlunga
Chofoza inkinobho ethi "Faka isicelo sefriji ekubukeni". Faka isihlungi kuwo wonke idatha yewebhusayithi.
Abakwa-spammers bokudlulisela badla ukuphindaphinda kabili inani lezivakashi ezisemthethweni kusayithi lakho noma ngabe ubheka izibalo zakho ze-Google Analytics. Ukufihla abakwa-spammers abaziwayo, i-malware, igciwane le-Trojan, kanye nezinye izinsongo ku-setting yakho ye-Google Analytics akusizi lokho okuningi.
Ukuze ugweme ukuba yisisulu sabakwa-spammers bokudlulisela kanye ne-traffic yangaphakathi, faka i-WordPress ku-PC yakho bese uyigcina ibuyekeziwe. Ezimweni eziningi, ukuvakashela izingosi ezingaziwa kukuchazela ukukhubazeka kogaxekile nokungalungile, gwema ukuvakashela amasayithi ngaphandle kokuthi usebenzisa iziphequluli zombhalo. Amanye amasu abekwe endaweni ukuvimbela abagaxekile be-sphost kusukela ekufinyeleleni nasekulawuleni isayithi lakho. Ngokusho kochwepheshe, abagaxekile noma abahlaseli beghost bavame ukusebenzisa amahostela amanga ukuze bafinyelele noma bavakashele isayithi lakho. Ukwakha isihlungi segama lomsingeli ovumelekile akuvimbeli kuphela ugaxekile ekuthinteni iwebhusayithi yakho kodwa futhi kugcina izinsongo kanye ne-malware ekuthinteni isayithi lakho.
Ukuba nezibalo ze-Google Analytic ezingenalutho ku-spammers yokudlulisela kanye nomgwaqo wangaphakathi kuhlanganisa nokuqapha okukhulu. Akudingeki uqhubeke ungeze izihlungi ezingapheli ukuvimbela abaduni abanonya kanye nogaxekile wokudlulisa. Ukwengeza isihlungi segama lomsingeli ovumelekile akubandakanyi izizinda eziningi nabaduni abazama ukusebenzisa insizakalo yokuphepha kwe-cyber. Ugaxekile wokudlulisela phambili uphuma ekulawuleni futhi udle isikhathi esiningi nemali.